Soo-saareyaasha alaabta Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad wax soo saar jaban
Naxaasku waa shey ka kooban naxaas iyo zinc, waana shey ku habboon soo saarista qaybaha mashiinnada CNC (oo ay ku jiraan qaybaha milled CNC).
Aluminium alaabooyinka dhinta-shubista ayaa inta badan loo adeegsadaa elektarooniga, gawaarida, matoorrada, qalabka guryaha iyo warshadaha isgaarsiinta qaarkood. Qaar ka mid ah alaabooyinka isku-dhafan ee aluminium tayo sare leh, oo sax ah, oo adag ayaa sidoo kale loo isticmaalaa warshadaha leh baahiyo sare sida diyaaradaha waaweyn iyo maraakiibta. Isticmaalka ugu weyn wali wuxuu ku jiraa qaybaha qalabka qaar.
Daawaha aluminiumku waa qalab bir ah oo aan bir ahayn.
Daawaha Aluminiumku wuxuu leeyahay cufnaan hoose laakiin xoogaa sarreeya, taas oo ku dhow ama ka sarreysa tan birta tayada sare leh. Waxay leedahay baaxad wanaagsan waxaana looga baaraandegi karaa qaabab kala duwan. Waxay leedahay habsami u socodka korantada, kuleylka kuleylka iyo u adkeysiga daxalka. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa warshadaha oo isticmaalkeedu waa kan labaad oo kaliya birta. Qaar ka mid ah aluminiumyada aluminium ayaa lagu daaweyn karaa kuleylka si loo helo sifooyin farsamo oo wanaagsan, astaamo jireed iyo iska caabbinta daxalka.
Daawaha naxaasta ah ee loo yaqaan 'Cast allo alloys' ayaa loo qaybiyaa laba qaybood, oo kala ah naxaas iyo naxaas. Naxaasku waa dahaadh naxaas ah oo leh zinc oo ah isku-darka ugu weyn ee lagu daro walxaha laysku daro.
Naxaasku waa shey ka kooban naxaas iyo zinc, waana shey ku habboon wax soo saarka qaybaha mashiinnada (oo ay ku jiraan qaybo been abuur ah). Dareemida Die waxaa loo soo gaabiyaa sida been abuur, taas oo ah habka loo shubay taas oo dareeraha daawaha ah ee la shubay lagu shubo qolka saxaafadda, daloolka caaryada birta ah waxaa lagu buuxiyaa xawaare sare, dareeraha daawaha ah ayaa lagu xoojiyaa cadaadiska si loo sameeyo kabka. Faa'iidada Ouzhan had iyo jeer waxay ahayd in la habeeyo walxaha naxaasta ah, taas oo ah, filtarka ka samaysan naxaasta, kuwaas oo ah qaybo warshadeed. Nidaamka wax soo saarka waxaa markii ugu horreysay soo saaray Ningbo, Zhejiang oo ku yaal Shiinaha.
Birta kaarboonku waa bir bir-karboon ah oo leh kaarboon ka kooban 0.0218% ilaa 2.11%. Sidoo kale loo yaqaan birta kaarboon. Guud ahaan, waxa kale oo ku jira qaddar yar oo silikoon ah, manganis ah, baaruud ah, iyo fosfooras.
Ridaya qaybo daawaha aluminium ah
Daawaha aluminiumku waa qalab bir ah oo aan bir ahayn. Daawaha Aluminiumku wuxuu leeyahay cufnaan hoose laakiin xoogaa sarreeya, taas oo ku dhow ama ka sarreysa tan birta tayada sare leh. Waxay leedahay baaxad wanaagsan waxaana looga baaraandegi karaa qaabab kala duwan. Waxay leedahay habsami u socodka korantada, kuleylka kuleylka iyo u adkeysiga daxalka. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa warshadaha oo isticmaalkeedu waa kan labaad oo kaliya birta.
Naxaasku waa shey ka kooban naxaas iyo zinc, waana shey ku habboon wax soo saarka qaybaha mashiinnada (oo ay ku jiraan qaybo been abuur ah). Dareemida Die waxaa loo soo gaabiyaa sida been abuur, taas oo ah habka loo shubay taas oo dareeraha daawaha ah ee la shubay lagu shubo qolka saxaafadda, daloolka caaryada birta ah waxaa lagu buuxiyaa xawaare sare, dareeraha daawaha ah ayaa lagu xoojiyaa cadaadiska si loo sameeyo kabka.
Mashiinka balaastigga ah waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo ku habboon mishiinka, nayloon (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP). Markaad xulaneyso qalabka loogu talagalay sawirada naqshadeynta, balaastikada injineernimada ku habboon waa in lagu xushaa iyadoo loo eegayo bay'ada isticmaalka iyo shuruudaha u dhigma ee qaybaha mashiinnada CNC.